Soosaarayaasha Qalabka - Shiinaha Warshadaha & Alaab-qeybiyeyaasha
Iibsigii alaabta ee dhammaaday
✭ Daboolka dambe ee balaastiga ah ee taageerahan ayaa laga sameeyay PA66 + 30GF wax caag ah. Maadadan balaastigga ah ayaa u adkaysata daxalka iyo gabowga, waxayna ku habboon tahay adeegsiga cimilada kala duwan.
✭ Qalabkan balaastiigga ah ee caaga ah ayaa loo dhoofiyaa dalalka Yurub, nolosha caaryadu waxay u baahan tahay inay gaarto 500,000 jeer. Qalabka caaryadu wuxuu adeegsadaa 1.2343 maaddo adag, iyo ka-baaraandegga caaryada ayaa adeegsada naxaas garaaf leh. Qaab dhismeedka caaryada waxaa lagu sameeyaa caaryo saddex-saxan ah, wareegga cirbaduna waa 32 ilbiriqsi. Taxanahan oo xuduudaheedu yihiin oo dhan la tixgelinayo qiimaha macaamiisha ee naqshadeynta caaryada iyo wax soo saarka, si ay ugu guuleystaan ​​faa'iidada wax soo saarka ugu badan ee suurtogalka ah macaamiisha.